IShanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd.ngenye yomkhiqizi omkhulu wepompo ochwepheshe, onguchwepheshe wokucwaninga nokuklama, ukukhiqiza nokuthengisa amaphampu asezingeni eliphakeme, izinhlelo zokuphakelwa kwamanzi nezinhlelo zokulawula amaphampu. Ihola imboni yokukhiqiza impompo eChina. Ingqikithi yabasebenzi ingaphezu kwe-5000, equkethe ngaphezu kwe-80% yabaphethe idiploma yasekolishi, onjiniyela abangaphezu kwe-750, unjiniyela omkhulu nodokotela. Iqembu le-KAIQUAN linamapaki ama-5 e-Industrial e-Shanghai, e-Zhejiang, e-Hebei, e-Liaoning nase-Anhui anendawo ephelele engama-7,000,000 square metres.
Ngokwenzuzo yokuthengisa, iShanghai Kaiquan ibekwe endaweni yokuqala engu-1 iminyaka eyi-15 ilandelana embonini yokupompa eChina kwathi ngo-2019 ivolumu yokuthengisa yaleli qembu yizi-850 million USD. Ngosizo lwezinhlelo ze-ERP & CRM, i-KAIQUAN inikeza izixazululo zobuchwepheshe kuwo wonke amakhasimende emakethe yezilwandle. Ngaphezu kwalokho, i-KAIQUAN isungule inethiwekhi yensizakalo kazwelonke enezinkampani ezingama-32 zokuthengisa zamagatsha nezinhlangano ezingama-361. Ukukhiqiza imikhiqizo yokuncintisana nethembekile yamakhasimende anelisayo yinto yokuqala eza kuqala kaKaiquan.
(I-Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co, Ltd. ibingumkhiqizi ochwephesha kakhulu wama-motors angaphansi kwamanzi namaphampu kagesi angaphansi kwamanzi angahulumeni wase China kazwelonke).
Ngo-2008, iKaiquan Group yathenga iHefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. yashintsha igama layo yaba yiHefei Kaiquan Motor & Electrical Pump Co., Ltd. Ihlanganisa indawo ephelele engama-270,000 square metres nendawo yokwakha engama-230,000 square metres yokukhiqiza . Njengamanje, inabasebenzi abangaphezu kwe-1500 okubandakanya onjiniyela abangama-278 nabanjiniyela abaphezulu abangama-56. Kunezinsiza ezisezingeni eliphakeme zokuhlola, zokuhlola nokuklama zamamoto namaphampu angaphansi kwamanzi lapha.
Imikhiqizo Main: Imoto engena ngaphansi, ipompo elicwilizayo, ipompo lokulahlwa kwendle, ipompo elwa nomlilo, ipompo eligelezayo le-Axial, Ipompo eligelezayo elixubekile, uhlelo lokupakisha olungezansi, iphaneli yokulawula, ipompo yecala leSplit, ipompo lesiteji esisodwa njalonjalo.
I-Shijiazhuang Kaiquan Slurry Pump Co., Ltd. yasungulwa ngo-2005 ngokutshalwa kwemali okuphelele kwezigidi ezingama-20 zama-USD, ehlanganisa indawo ephelele yamamitha-skwele angama-47,000 nendawo yokwakha cishe kwamamitha-skwele angama-22,000. Njengamanje, inochwepheshe abangama-250, ochwepheshe abaphezulu bezobunjiniyela kanye nabasebenzi abanamakhono. Kukhona ulayini wokukhiqiza we-resin othuthukile emhlabeni kanye nezihlanganisi zesihlabathi eziqhubekayo. Zonke izigaxa zisebenzisa ukubunjwa kwesihlabathi se-phenol futhi inezithando ezi-2-ton & 1-ton eziphakathi nendawo ezingaphonsa izingcezu ezingamathani ayi-8. Ngaphezu kwalokho, inamasethi angaphezu kuka-300 emishini esezingeni eliphakeme.
Ikheli: Indawo Yezimboni YaseMpumalanga Yurophu, Yongjia County, Wenzhou Idolobha, Isifundazwe Zhejiang, China